Indawo yokuhlala yasemaphandleni I-Agriturismo Antico Borgo 1 - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yasemaphandleni I-Agriturismo Antico Borgo 1
Ifama sinombuki zindwendwe onguGiuseppe
I-agritourism "ye-Antico Borgo" ibekwe kwindawo yakudala kwaye ivuselela imvelaphi yamaxesha aphakathi. Ihlaziywe ngemathiriyeli yemveli ukuze kugcinwe incasa yeendawo ezisemaphandleni kunye nokuhambelana nembonakalo yomhlaba. Ejikelezwe ngeenduli eziluhlaza zaseMarostica, yindawo efanelekileyo yokuchitha ixesha elisemgangathweni kwaye ibanjwe yimvakalelo enokuthi isinike indalo kuphela.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi amabini enamagumbi okulala (ibhedi enkulu), igumbi lokuhlala elinekhitshi elincinci nesofa ekwayibhedi, igumbi lokuhlambela labucala. I-WiFi yasimahla, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
4.95 · Izimvo eziyi-57
Kukho iindawo zokuhlala ezimbini ezikhoyo, isidlo sakusasa sibandakanywe kwigumbi eliqhelekileyo, apho iimveliso zethu zihanjiswa khona.
Indlu yasefama i-“Ca’ Marosi”, eyayiphethwe lusapho lukaMaroso, yayikukuzalwa ngenjongo yokugcina izithethe zemihlaba yethu ziphila kunye nokukhuthaza ukunyaniseka kwempahla ekhuliswayo kunye nomjikelo wamaxesha onyaka nokugcina okusingqongileyo kunye neentlobo-ntlobo zezityalo nezilwanyana zommandla wethu.
Ifama ivelisa ioli yomnquma, ijam evela kwiziqhamo ezahlukeneyo, iicheri, amakhiwane, iipesika, ama-apile nokunye, okweendidi zalapha ekhaya.
Ubushushu obufunekayo ukugcina ubushushu obubambekayo buvela ngokupheleleyo kwibhoyila ye-biomass kunye ne-solar kunye ne-photovoltaic implants.
Umbuki zindwendwe ngu- Giuseppe
Mna no-Lorena siya kuba kwinkonzo yakho kuyo nayiphi na imfuneko, sinokukunika iingcebiso zentengiso yendlela yendawo okanye indlela yakho, okanye ukukubonisa kumasimi epropathi, ngaba besilima iziqhamo ezahlukeneyo, ngokukodwa i-cherry neminquma, okanye iinkuni.
Mna no-Lorena siya kuba kwinkonzo yakho kuyo nayiphi na imfuneko, sinokukunika iingcebiso zentengiso yendlela yendawo okanye indlela yakho, okanye ukukubonisa kumasimi epropathi, n…
Inombolo yomthetho: ¹039 del 16/11/2012